Glory Magic V: Snapdragon 8 Gen 1 ပါတဲ့ ပထမဆုံး ခေါက် နိုင်သော စမတ်ဖုန်း – Pandaily
Jan 10, 2022, 22:26ညနေ 2022/01/10 23:02:04 Pandaily
တရုတ် စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်Honor သည် တနင်္လာနေ့တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် ခဲ့သည်၎င်း၏ နောက်ဆုံးပေါ် ဖု န်း၊ Magic V ခေါက် နိုင်သော စမတ်ဖုန်း များ၊ operating system အသစ်နှင့် GS3 စမတ် နာရီ များအပါအ ၀ င် ထုတ်ကုန် အသစ် များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု များစွာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Honor Magic V ကို
Glory Magic V ကို Snapdragon 8 Gen 1 mobile platform နဲ့ မောင်းနှင် ထားပြီး Magic Live AI engine နဲ့ ပံ့ပိုး ပေးထား တာမို့ သုံးစွဲ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စေပါတယ်။
Magic V ရဲ့ flagship feature ကတော့ သူ့ရဲ့ internal folding screen ၊ angle-to-angle size 7.9 inch, resolution 2272 x 1984, refresh rate 90Hz နဲ့ aspect ratio 10.3:9 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါေပမယ့္ အျပင္ မ်က္ႏွာျပင္ ရဲ႕ Resolution ကေတာ့ 2560×1080 ျဖစ္ၿပီး Refresh Rate ကေတာ့ 120Hz ျဖစ္ကာ Aspect Ratio ကေတာ့ 21:9 ျဖစ္ပါတယ္။ Horno က သုံးစွဲ သူတွေအနေနဲ့ ဖွင့် ချင် စိတ် မရှိ တဲ့အခါ ဒီ ပစ္စည်း ကို ပိုပြီး အသုံး များ လာအောင် ကူညီ ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ခေါက် သောအခါ Magic V သည် အကျယ် ၇၂. ၇ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၄. ၃ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၁၆၀. ၄ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၁၄၁. ၁ မီလီမီတာ နှင့် ၆. ၇ မီလီမီတာ အထူ ရှိသည်။
ဘက်ထရီ ပိုင်း မှာတော့ Glory Magic V မှာ 4750mAh Battery ပါဝင်ပြီး အချိုးမညီ တဲ့ Dual Battery Structure ပါ ရှိပြီး 66W Wired Quick Charge ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။
ဒီ မော်ဒယ် ဟာ သီးခြား လွတ်လပ် ပြီး လုံခြုံ တဲ့ သိုလှောင်မှု ကိုထောက်ပံ့ ပေးတဲ့ Honor ရဲ့ ပထမဆုံး ဖုန်း ဖြစ်ပြီး CC EALS + Security Certified Security Memory Chip ပါ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး မော်ဒယ် ကိုလည်း Honor Dual Tee OS နဲ့ ထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။ ဤ လုံခြုံရေး ပုံစံ အသစ်သည် ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်း စက် သည် အမြစ်တွယ် နေပြီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ခိုးယူ ခြင်းကို အဓိပ္ပာယ် မရှိသော စကားဝှက် စစ်မှန် ကြောင်းအတည်ပြု ရန်လိုအပ်သည်။
Glory Magic V ကို 50-megapixel main camera, 50-megapixel spectrum enhancement camera, 50-megapixel ultra-wide-angle camera နဲ့ 8 * 8dTOF Honor မွာ အေရွ႕ ကင္မရာ 42 megapixel ကို အျပင္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွစ္ခု စလံုး မွာ တပ္ဆင္ ထားပါတယ္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Honor Magic V မိတ္ဆက္ ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပ မည္
Honor သည် Magic V ကို ငွေ ရော င်၊ အနက်ရောင် နှင့် လိမ္မော်ရောင် အပါအ ၀ င် အရောင် သုံးမျိုး ဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ အမ်ားျပည္သူ ဝယ္ယူ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ 12 + 256GB ဗား ရွင္း အတြက္ ယြမ္ ၉၉ ၉၉ (ေဒၚလာ ၁၅ ၆၉) နဲ႔ 12 + 512GB ဗား ရွင္း အတြက္ ယြမ္ ၁၀၉ ၉၉ ျဖစ္ပါတယ္။
Magic UI ကို 6.0
Fold Screen ပါတဲ့ Magic V စမတ်ဖုန်း အပြင် Honor က Magic UI 6.0 OS အသစ် ကိုလည်း မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူများက Glory Magic UI 6.0 သည် Magic Live + Base OS နှင့် Magic Live + Cross-device OS တို့၏ 3D Smart Experience ကို Magic Live Intelligent Engine ၏ real-time online sensing ၊ နားလည် မှုနှင့် သင်ယူမှု စွမ်းရည် များဖြင့် အဆင့်မြှင့် တင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ MagicUI 6.0 ကိုလည်း အသုံးပြုသူ ဒေတာ ဒေသခံ အပြောင်းအလဲနဲ့, အသုံးပြုသူ ခွင့်ပြုချက်, Anti-ကျူးကျော်ဝင်ရောက် ခြင်း ကာကွယ် ရေးနှင့် chip ကို encryption ကို အပါအဝင် အဓိက privacy ကိုကာကွယ် စောင့်ရှောက် မှု လေးခု ဆောင်ခဲ့ လေ၏။
Adaptation ပိုင်း မှာတော့ Honor က Magic UI 6.0 ကို သူ့ရဲ့ Magic3series မှာ Q1 ၊ 60 နဲ့ 50 series မှာ Q2 နဲ့ X30 နဲ့ V40 မှာ Q3 ကို အဆင့်မြှင့် မယ်လို့ ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
Honor GS3စမတ် နာရီ
Honor GS3မွာ 3D Hypercurved Glass ကို အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။ စမတ် နာရီ သည် အလေးချိန် ၄၄ ဂရမ် သာ ရှိပြီး 326ppi Retina Display, 1.43-inch AMOLED Touch Display နှင့် 1000 Nits အထိ တောက်ပ သည်။ Healthy 5.0 Technology နဲ့ ရှစ် လိုင်း နှလုံးခုန် နှုန်း AI Engine ကို ထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်။
Honor Watch GS3ကို Ocean Blue, Classic Gold နဲ့ Midnight Black ဆိုပြီး အရောင် သုံး မျိုးနဲ့ ဝယ်ယူ နိုင် မှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်း ကတော့ ယွမ် ၁၂ ၉၉ နဲ့ ရောင်းချ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Honor Magic V မိတ္ဆက္ ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်င္းပ မည္
သောကြာ နေ့တွင် Honor သည် ၎င်း ၏တရားဝင် Weibo အကောင့် မှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီ သည်၎င်း၏ ထင်ရှားသော ထုတ်ကုန် အသစ် ဖြစ်သော Honor Magic V အတွက် ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်၊ ပေကျင်း အချိန် ၁၉း၃၀ တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ် လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Gadgets Jan 07 ဇန်နဝါရီ 8, 2022
Gadgets Dec 22 ဒီဇင်ဘာ 22, 2021
Gadgets Jan 07 မေ 10, 2022